Ebe nsọ nke Eziokwu na Pattaya | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | General, Tailandia
Ebe nsọ nke Eziokwu na Pattaya (Thailand) bụ ebe ndị njem nleta. O biliri ihe karịrị otu narị mita n’elu ala, Sanlọ Nsọ nke Eziokwu na Pattaya bụ nnukwu ihe owuwu otu ụdị nke na-asọpụrụ echiche oge ochie banyere ,wa, ihe ọmụma oge ochie na nkà ihe ọmụma ọwụwa anyanwụ. Agbanyeghị, ọ dịghị ka ụlọ arụsị ndị ọzọ na Thailand.
Ọ bụkwa na nnukwu ebe nsọ a rụrụ osisi teak a tụrụ atụ nke ọma. Bịaru mgbidi ya, ọnụ ụzọ ya na ogidi ya bụ ahụmahụ dị ịtụnanya, na-achọpụta etu esi edozi isi nke Buddha, ụmụ anụmanụ dị nsọ na ọtụtụ narị ebumnuche dị iche iche.
1 Mmalite nke Ebe Nsọ
2 Nkà ihe ọmụma nke Sanlọ Nsọ nke Eziokwu
3 Halllọ Nzukọ Alaeze nke Ebe Nsọ nke Eziokwu
Mmalite nke Ebe Nsọ
A mụrụ ebe nsọ nke Eziokwu site na uche nke Lek Viriyaphant, nke a makwaara dị ka "Khun Lek", otu onye ọgaranya Thai eccentric onye chọrọ site na ụlọ a na-adịghị ahụkebe iji nyefee ụwa ọgaranya ụlọ na ọdịbendị ọdịnala nke Thailand. Mwube ahụ malitere na ụlọ ahụ na 1981 mana ọrụ nyocha na akwụkwọ banyere ụlọ ọdịnala Thai amalitela ọtụtụ afọ tupu mgbe ahụ.
A na-akpọ ụlọ ahụ oflọ nke Eziokwu na, ọ bụ ezie na ọ gwụbeghị, ọ bụrịrịrịrị otu n'ime ebe ndị njem nleta na Pattaya. Ndị omenkà na ndị okike na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ebe ahụ kwa ụbọchị. A na-eme atụmatụ na a ga-arụcha ọrụ ahụ niile na 2025, n'agbanyeghị na Khun Lek agaghịzi enwe ike ịhụ ya n'ihi na ọ nwụrụ afọ ole na ole gara aga. N'agbanyeghị ihe a niile, onye na-elekọta Thai hapụrụ ntuziaka doro anya iji jiri nlezianya mezuo atụmatụ mbụ ya, nke anyị nwere olileanya na a ga-akwanyere ùgwù.
Yabụ ụlọ nsọ nke Eziokwu bụ ọrụ na-aga n'ihu ugbu a, nke na-anaghị anapụta ya na nnọchibido ndị njem, bụ ndị ji ọ gladụ na-akwụ ụgwọ ntinye 500 baht (ihe dị ka € 14, ọnụahịa dị oke ọnụ maka ụkpụrụ Thai) iji hụ ọrụ nke ndị na-akpụ akpụ nso.
Nkà ihe ọmụma nke Sanlọ Nsọ nke Eziokwu
Dị ka ndị maara ebe nsọ nke Eziokwu si akọwa nke ọma, kemgbe oge Agha Nzuzo na ruo ụbọchị a, ụwa adịla n'okpuru nduzi nke mmepeanya ọdịda anyanwụ nke ịhụ ihe onwunwe n'anya na nraranye na teknụzụ gosipụtara. Ọtụtụ ebe a na-ebibi ebibi ma ụmụ nwoke na-apụ n'ụkpụrụ na ụkpụrụ omume ha.
Ndị mmadụ abụwo ndị na-achọ ọdịmma onwe ha nanị na-ebibi gburugburu ebe obibi ha na ihe ndị dị ndụ n’ụwa, yana onwe ha. Ebube nke Eziokwu bụ site na ịdị mma sitere n'okpukpe, nkà ihe ọmụma na nka. Ebe nsọ ahụ gosipụtara ndị okike asaa site na ihe osise ndị a pịrị apị n'ime ha, ha bụ: Eluigwe, Earthwa, Nna, Nne, Ọnwa, Anyanwụ na Kpakpando.
Na akụkụ nke elu ị nwere ike ịhụ ụlọ elu anọ nke ebe nsọ ahụ bụ ihe anọ na-eduga na ụwa kachasị mma dị ka nkà ihe ọmụma nke ọwụwa anyanwụ nke dị na ihe osise osisi nke mbara igwe (Deva) nke na-ejide ọtụtụ okooko osisi na-anọchite anya ntọala nke okpukpe. Ihe osise nke osisi nke eluigwe na nwata, onye ndu na onye meworo agadi nwekwara ike ịchọta dị ka ogidi ụwa nke na-anọchite anya ndụ enyere ụmụ mmadụ. Na onu ogugu enwere ugbua na igwe nke nwere akwukwo nwere ihe nnochi anya nke ihe omuma rue mgbe ebighebi. Onu ogugu ozo nke na-ejide nduru na-ese onyinyo udo.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe osise a pịrị apị nke na-anọchi anya nkà ihe ọmụma nke Ebe Nsọ nke Eziokwu a, ebe mpako na-ahapụ n'ọnụ ụzọ na echiche bụ ịbanye na ịdị mma nke obi iji nwee ike ịchọta ezigbo ụkpụrụ nke ndụ, ebe obi ụtọ bụ ụzọ na akụkụ gbara ọchịchịrị nke obi kwesịrị ịbụ nke ebighebi n'etiti mmadu.
Halllọ Nzukọ Alaeze nke Ebe Nsọ nke Eziokwu
A na-achọta ezi obi ụtọ n'ime obi ụtọ ime mmụọ. Ebumnuche nke ndị mmadụ na-eme ka ndụ nwee isi, ọ bụ ya mere enwere mkpebi maka ụwa dị mma, ihe mmadụ niile chọrọ. Nkwenkwe ọ bụla, okpukpe ma ọ bụ nkà ihe ọmụma nwere ike iduga n'ụzọ dị iche iche. Mana iji tụgharịa uche na ajụjụ dị mkpa nke eluigwe na ụwa, mmadụ ga-ebi n'udo. Ebe nsọ ahụ nwere ọnụ ụlọ dị iche iche kwesịrị ịga leta ma mechara gaa.
Roomlọ mbụ: Si malite. Ime ụlọ a na-ese n’eluigwe na ụwa. Eluigwe na ụwa nke sitere na gburugburu nke sistemụ anyanwụ na ụwa, ụwa anyị nwere ihe anọ: ụwa, mmiri, ifufe na ọkụ. A na-anọchikwa ọnọdụ uche na ịhụnanya, obiọma, ọmịiko, ọmịiko na nkwekọrita.
Lọ nke abụọ: Anyanwụ, ọnwa na kpakpando. Ọ bụ akụkọ banyere ndị okike atọ nyere ọdịdị ndụ. Ekele maka Anyanwụ ehihie na abalị, ọnwa na-akpata mgbanwe na kpakpando bụ ọnọdụ onye ọ bụla. Knowledgemụ mmadụ dị iche na ndị ọzọ kere eke site na mmụta, edemede, na omume.
Nke atọ n'ime ụlọ: ezigbo ịhụnanya nke ndị nne na nna. Biri ọnụ, dịka omenaala nke ọha mmadụ na ezinụlọ dum, ọha mmadụ, mba na ụwa.
Lọ nke anọ: ịhụnanya, obiọma, ịchụ àjà na ịkekọrịta.
Na mgbakwunye na ime ụlọ ị nwekwara ike ịchọta etiti ụlọ nke na-anọchite anya ịhụnanya, obiọma na ịchụ àjà. Ọ na-anọchi anya ụzọ iji kwụsị njedebe, ịmara ụzọ nhụjuanya na ihe mgbu iji ghọta eziokwu nke eziokwu.
N’enyeghị oge maka nke abụọ, ọ bụrụ na ị gaa mpaghara a nke Thailand wee chọọ ịchọpụta ebe nsọ nke eziokwu, nwee mmasị na ịma mma ya ma nwee ike ịchọpụta n’ime gị ka mma, egbula oge ịbanye na weebụsaịtị ya wee zụta tiketi iji nweta ha n'aka gị tupu ịmalite njem gị. O doro anya na ozugbo ị gara ileta ya, ị gaghị echefu ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Tailandia » Sanlọ Eziokwu nke Pattaya
Pzọ panoramic atọ dị na Central America, ụzọ gasị ka ha nwee ịhụnanya mgbe ị na-eme njem
Ihu igwe na Nepal